Politika momba ny tsiambaratelo - Alietc.com
Ny fampahalalana momba ny Politika ao amin'ity antontan-taratasy ity dia mifandraika amin'ny fampahalalana izay nomenay anay, na an'ny tena manokana na ny orinasanao, ary ny mombamomba anao angoninay ho azy na avy amin'ny antoko fahatelo.
Ny fampahalalana momba ny Politika momba ny tsiambaratelo rehetra dia mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena, ary iharan'ny fanovana sy fanitsiana raha ilaina. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranokalanay sy ny fanekenay momba ny fepetra sy ny fepetra apetratsika, dia misoratra anarana ianao ary manaiky mifanaraka amin'ireto fampahalalana farany amin'ny fitehirizana, ny fizarana ary ny fiarovana momba ny fiarovana toy ny miasa ao ambanin'ny ALIETC.com.
Ny tsy fanekena na hanaraka ny politika ao amin'ity antontan-taratasy ity dia hiafara amin'ny fisarahana tampoka ny serivisy, na ny famerana amin'ny kaontinao. Raha manana fanontaniana momba ny filazalazanay momba ny politika izahay na ny fepetra sy ny fepetra, dia manorata any amin'ny biraon'ny serivisy.
Hasaina angatahana ianao hanome vaovao fampitaovana izay takiana hitarika raharaham-barotra amin'ny tranokalanay. Ny fisoratana anarana eo amin'ny lampihazo dia mitaky ny fampahafantarana ny anaranao, ny adiresy, ny laharana an-tariby, ny anaran'ny asa sy ny departemanta (raha ilaina).
Hasaina angatahana ianao hanome ny mombamomba ny mombamomba anao sy izay rehetra mifandraika amin'ny toetran'ny orinasanao, toy ny anaran'ny orinasa, ny karazana orinasa sy ny fahazoan-dàlana amin'ny varotra.
Fanaparitahana sy fizarana vaovao
Azontsika atao ny manambara ireo antontan-taratasy nangonina sy notehirizina amin'ireo mpandray ireto:
Ireo mpikambana ao amin'ny vondrona ALIETC sy ireo mpiara-miasa aminy sy / na mpamatsy serivisy voatondro miasa izay hiara-miasa amintsika hiatrehana entana sy serivisy.
Ny mpiara-miasa ato aminay - mba hahafahan'izy ireo mandefa fihenam-bidy sy tolotra omena anao
Mpanome serivisy fandoavam-bola mba handrindra ny fifanakalozana ary handaminana sy hanamarina ny kaonty
Solontenan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, mba hahafahan'izy ireo manome serivisy sy fanampiana aorian'ny fitsaboana.
Mpanome fanaraha-maso ny risika, hahafahana manombana ny fiarovana ny kaonty sy ny fifanakalozana.
Mpiandraikitra ny lalàna, mpanolotsaina matihanina, masoivohom-panjakana, mpiantoka sy vondron-dalàna hafa mifehy ny lalàna azo ampiharina ary hampihatra, miaro sy miaro ny zontsika ara-dalàna ary miaro ny tombontsoanao sy ny an'ny olon-kafa.
Cookie iray dia sombin-tsoratra kely izay voatahiry ao amin'ny kapila mafy an'ny solosainao amin'ny alàlan'ny browser-Internet. Ny Cookies dia nametraka ny ALIETC.com rehetra dia takiana hampandeha tsara ny tranokala amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny asan'ny tranokalanao sy ny hanoloranao entana sy serivisy. Esorina ny mofom-pivoriana raha vao manidy ny navigateur ianao ary mampiasa mofomamy maharitra hatrany. Ny ALIETC dia mampiasa cookies sy maharitra cookies.
Ny fitazonana ny fampahalalana
Notazoninay ny fampahalalana momba anao manokana sy ny orinasanao raha mbola mitazona orinasam-pifandraisana ara-dalàna. Asaina manao izany isika mba hampandehanana ny entana sy ny serivisy izay nampanantenaina ao anatin'ny fanambaranay.
Raha manapa-kevitra ny hamarana ny orinasanao amin'ny ALIETC.com ianao sy hanidy ny kaontinao, dia hesorina ny fampahalalana manokana momba ny momba ny tena manokana sy ny orinasa. ALIETC.com na hanala na tsy mionona ny fampahalalana miankina amin'ny hoe efa voafafa na natsahatra mandrakizay ny kaontinao (ho an'ny mpanjifan'ny ALIETC.com serivisy).
Raha noho ny antony rehetra, ny fampahalalana momba ny tenanao na ny orinasanao dia tsy ho voafafa avy hatrany (amin'ny tranga izay nitahiry ny fampahalalana notahirizina ao amin'ny tahiry an-jorony) ny fampahalalana azo averina dia hialana amin'ny famolavolana bebe kokoa mandra-pahalany tanteraka ny fampahalalana.